Kaplan Higher Education Academy ~ The ICT.com.mm Blog
Kaplan Higher Education Academy သည် Singapore Government အသိအမှတ်ပြု Singapore Quality Class နှင့် Edu Trust4years လက်မှတ်ရရှိထားသော Academy ဖြစ်သည်။ Top3Best Private Schools In Singapore (2009,2010,2013 Asia One People’s Choice Awards) ဆုများကိုလည်းရရှိထားသည်။ PoMo&Wilkie Edgeဟူ၍ City Campus နှစ်ခုရှိပါသည်။
Murdoch University (Australia) , University of Portsmouth (UK) , University of Bedfordshire (UK), Northumbria University (UK), Royal Holloway University of London (UK) နှင့် University College Dublin (Ireland) အစရှိသောနိုင်ငံများမှ တက္တသိုလ်ကြီးများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ကျောင်းစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် International အသိအမှတ်ပြု Degree များကိုရယူနိုင်ပါသည်။
ထိုနိုင်ငံများတွင် (၃) နှစ်သင်ရမည့် Degree ကို Kaplan (Singapore) ၌ (၂)နှစ်ကျော်သင်ရုံဖြင့် ရရှိစေနိုင်သည်။
ကျောင်းသားသည် ၁၀တန်းအောင်မြင်ပြီးသော အဆင့်ဖြစ်၍ Bachelor Program သို့လျှောက်ထားလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ Diploma တန်းများမှစတင်၍တက်ရောက်ရမည်။
ကျောင်းသားသည် ဘွဲ့တစ်ခုရရှိထား၍ Master Program သို့လျှောက်ထားလိုပါက လိုအပ်လျှင် Diploma တန်းများမှတဆင့် Master Program သို့တက်ရောက်ရမည်။
NCC Education (UK), ABE (UK) အစရှိသည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Diploma ရရှိထားသူများသည် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်များ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Kaplan တွင်ပြည်ပမှကျောင်းလာတက်သော ကျောင်းသားများကို လေဆိပ်ကြိုပေးခြင်း၊ Bank Account ဖွင့်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ကျောင်းသားများနေထိုင်ရေးကို စီစဉ်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
တက်ရောက်နိုင်သော Program များမှာ –
3. Master of Science in Business
1. Bachelor of Arts (Honours) One Year Top-Up
2. Bachelor of Arts (Honours)
4. Bachelor of Business Studies (Honours)
6. Bachelor of Communication
1. Diploma in Professional Business English Programme
2. Professional Diploma in Securities and Investment Management
4. Diploma in Counseling
5. Diploma in Mass Communication
6. Diploma in Commerce
7. Diploma in Accountancy
• Preparatory Course for IELTS
• Certificate in Foundation Studies
Kaplan Higher Education Academy ၏ Affiliated Centre တစ်ခုဖြစ်သော KMD Computer Centre သည် အမြင့်မားဆုံးပညာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိသည်။ အထက်ပါအချက်လက်များနှင့် ပါတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက KMD Computer Centre (ပန်းဆိုးတန်း) 174-182, Pansodan Road (Middle Block), Kyauktada Tsp., Yangon, Ph – 01-381776, 01-381035, 01-391286သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Newer Acer 206 HQLCb
Older New Generation iPhone,iPadနဲ့ iPod တွေအတွက် Apple-certified Verbatim Lightning to USB Cable for Synchronization & Charging